थाइराइड के हो ? यसका लक्षण र उपचार के हुन्? - Malayakhabar
होम पेज फिचर थाइराइड के हो ? यसका लक्षण र उपचार के हुन्?
थाइराइड के हो ? यसका लक्षण र उपचार के हुन्?
शरीरको मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न थाइराइड हर्मोन आवश्यक पर्छ। थाइराइड रोग होइन। यो हाम्रो घाँटीमा हुने ग्रन्थी हो। यसले टी ३ र टी ४ नामक हर्माेन बनाउँछ। यो हर्मोनले शरीरलाई चाहिने तत्व विभिन्न अंग, कोशिकामा पु¥याउन सहयोग गर्छ र शरीरले तागत प्राप्त गर्छ। मेटाबोलिजम फोक्सो, हड्डी, छाला, मुटुलगायत शरीरका सबै अंगलाई चाहिने कुरा हो।
थाइराइड ग्रन्थीमा समस्या भयो भने थाइराइडको समस्या भएको मानिन्छ। हर्मोन बढी हुनुलाई हाइपर थाइराइडिज्म र हर्मोन कम हुनुलाई हाइपो थाइराडिज्म भनिन्छ।
थाइराइड ग्रन्थीले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन थाइराइड फङसन टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसमा थाइराइड स्टीमुलेटिङ हर्मोन (टीएसएच) जाँच हुन्छ। यसैबाट हर्मोन कम छ कि बढी छ भन्ने थाहा हुन्छ। टीएसएच एकदमै घट्न थाल्यो भने हर्मोन बढी छ भन्ने बुझिन्छ।
टीएसएचले थाइराइड हर्माेन र थाइराइड ग्रन्थीलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यो टेस्ट गरेपछि शरीरमा थाइराइडले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ।
के कारणले हुन्छ थाइराइड ?
हर्मोनको कमीले गर्दा हाइपोथाइरिटिजम देखिने समस्या बढी हुन्छ। ३०–४० वर्षअगाडि आइडिनको कमीले गर्दा हर्मोन कमी हुन्थ्यो। तर अहिले थाइराइड अटो इम्युनको कारणले गर्दा हुन्छ।
प्रतिरोधी प्रणाली (इम्युन सिस्टम) ले भित्रबाट थाइराइड ग्रन्थी भत्काउछ। लिथियम नामक औषधिले हर्मोन कम हुनसक्छ। हर्मोन बढीको समस्यामा झोल आयोडिन दिइन्छ।
कम हुँदा :
शरीर गलेको महसुस हुने।
निन्द्रा नलाग्ने वा बढी लाग्ने।
छाला फुस्रो हुने।
महिनावारी गडबड हुने।
बढी हुँदा :
तौल घट्दै जाने।
शरीर तातो हुने।
मुटुको धड्कन बढेजस्तो हुने।
चिडचिड पसिना आउने।
बढी रिस उठ्ने।
थाइराइडको समस्या पुरुषमा भन्दा बढी महिलामा देखिन्छ किनभने अटोइम्युन समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छ। र, हर्माेन कमीको समस्या पुरुषभन्दा महिलामा नै बढी देखिन्छ।
थाइराइड जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि हुने समस्या हो। हर्मोन बढीको समस्या २० देखि ४० वर्षको उमेरमा बढी देखिन्छ। हर्मोनको कमी जुनसुकै उमेरमा देखिने भएपनि ३०–४० वर्ष कटेपछि बढी देखिन्छ। नेपालमा थाइराइडका बिरामी कति छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक छैन। तर हामीले ६ सय ७१ जनामा गरेको अनुसन्धानमा ४.३२ प्रतिशतमा थाइराइडको समस्या देखिएको थियो। विश्व जनसंख्याको ४ प्रतिशतमा हर्मोनको कमी र १ प्रतिशतमा बढीको समस्या छ।
खाना बार्नुपर्छ कि पर्दैन ?
थाइराइड खानेकुराले गर्दा हुने समस्या होइन। सुरु–सुरुमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने गलगाँडको समस्यालाई बन्दा, काउली बार्नुपर्छ भनिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो हुँदैंन। अहिले देखिने थाइराइडको समस्यालाई खानामा त्यस्तो केही पनि बार्नुपर्दैन।
हर्मोन कमीको समस्यालाई ट्याब्लेटबाट पूर्ति गर्छौं। हर्मोन बढीको समस्यालाई भने दुइवटा उपचार छन् ः एउटा औषधि खाने र अर्को ग्रन्थी सुकाउने।
थाइराइड : भ्रम र सत्य
– (इन्डोक्राइनोलोजिष्ट डा योन्जन, काठमाडौं डायबेटिज एण्ड थाइराइड सेन्टरमा कार्यरत छिन्।)
अघिल्लो लेख अमेरिकी अर्थतन्त्रः तिव्र वृद्धितर्फ, छैन पर्याप्त कामदार र आपूर्ति ।
पछिल्लो लेख पोर्चुगललाई हराउँदै जर्मनी युरो यु–२१ च्याम्पियन।